विचार | Indrenionline.com | Page 11
एमालेभित्रको विवाद : जग हँसाइमात्रै
एमालेमा देखापरेका केही समस्याले पार्टीका समर्थक, शुभचिन्तक र आमजनसमुदायलाई चिन्तित र दुःखित तुल्याएको छ । यतिबेला एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । वर्तमान सरकार राष्ट्रिय स्वाधीनताको जगमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने मिसन लिएर मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको योजनासाथ अगाडि बढिरहेको छ ।वर्तमान सरकारसँग व्यक्तिका रूपमा केपी ओली वा अरू मन्त्रीको मात्रै भाग्य र भविष्य जोडिएको होइन । सिंंगो मुलुकको भविष्य र ...
इच्छुक र जनसंस्कृतिकर्मीको सम्बन्ध
खेम थपलिया रसियन क्रान्तिले गोर्की र चिनियाँ क्रान्तिले लु सुनजस्तै नेपाली धर्तीमा महान् जनयुद्धले कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ लाई जन्मायो । नेपाली धर्तीमा उहाँले गौरवपूर्ण बलिदान प्राप्त गर्नुभयो । उहाँ क्रान्तिकारी आस्थाको रक्षार्थ सदैव प्रेरक हुनु भएको छ । आफ्नै सहयोद्धाको गद्दारीका कारण तत्कालीन सत्ताले २०५९ साल जेठ ६ गते काठमाडौँबाट इच्छुकलाई गिरफ्तारी ग¥यो । एक सातासम्म निर्मम यातना दिएर उहाँको ...
माओवादी एकिकरण र भविष्यको प्रश्न ?
धनिराम शर्मा(ऋतुविचार) सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको सत्ता स्थापनाको लागि भन्दै २०५२ देखि जनयुद्धको भिषण संघर्षबाट जन्मेको माओवादी आन्दोलन टुटफुट पछि पुनः एकिकरणको अक्षमा जोडिएको छ । दश वर्षे लामो भिषण संघर्षको नयाँ अभ्यासबाट स्थापित माओवादी विभिन्न फुट, झुट, गाली ,गलौज इत्यादी खेलको घनचक्करबाट जेष्ठ ६ मा पुन एकिकरणको माला उनिएको हो । प्रचण्ड नेतृत्वको एमाओवादी, बादल नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी, मणिथापाको क्रान्तिकारी ...
सरकार परिवर्तनको हल्ला, कारण र एमाओवादीको अवको जिम्मेवारी
गणेश ओली केहि दिन यता नेपाली राजनीतिमा एउटा तरङ्ग आयो । बर्तमान केपि ओलीको सत्ता गठबन्धनको बलियो साझेदार एकीकृत माओवादीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिको रङ्गमञ्च एकाएक तातियो । भट्ट हेर्दा यो तरङ्ग एकाएक देखिए पनि सरकारको पूर्वकृयाकलाप र एमाओवादीले प्रधानमन्त्री केपि ओलीलाई पटक पटक गरेको आग्रहको उपज हो । यसमा सरकार गठनदेखि हालसम्म बर्तमान प्रधानमन्त्री ...
अख्तियार, कनकमणि दीक्षित र हाम्रो पत्रकारिता
निमकान्त पाण्डे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हालैमात्र साझा यातायातका अध्यक्षको हैसियतमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोग गरेको आरोपमा कनकमणि दीक्षितलाई पक्राउ गरेपछि उनको पक्षमा एकतर्फी समाचारहरू आइरहेका छन् । कारण उनी पत्रकारको आवरणमा पनि छन् । पत्रकारको आवरणमा जुनसुकै अपराधकर्म गर्न पनि छुट पाउनुपर्छ रु दीक्षितको पक्षमा प्रकाशित भइरहेका समाचारहरू र उनको पक्षमा आइरहेका अभिव्यक्तिहरूले यस्तै छुटको माग गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ । ...
हामी फेरि असुरक्षित घर त बनाउँदै छैनौं ?
श्रीकमल द्विवेदी भुइँचालो आफैंमा एउटा प्रयोगशाला हो। भुइँचालोबाट उत्पन्न तरंग जमिनमा कसरी प्रसारित हुन्छ, जमिन कसरी र कति हल्लन्छ, मानवनिर्मित संरचनाहरूलाई कस्तो असर पार्छ, कस्ता संरचनामा कति क्षति पुग्छ लगायत अध्ययन गर्ने ठूलो अवसर हो यो। यस्तो अध्ययनले भुइँचालोबाट सुरक्षित निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने आधार दिन्छ। सबै घना आवादी भएका ठाउँमा यस्ता ठूला भूकम्प आइरहँदैनन्। त्यसैले, संसारभरका भूवैज्ञानिकदेखि भवन ...
भन्नुस नेताजी ! म के जवाफ फर्काउ ?
भुपेन ‘‘ दाई हामीलाई नेताहरुले यसरी किन भुलेका ? शहीद परिवारलाई किन यति सम्म हेला गरेका ?’’त्यो बहिनीको यस्तो प्रश्नले मलाई अल्मलाईदियो । केही समयका लागी म नाजवाफ भए । किनकी यस्तो प्रश्नको चितबुझदो जवाफ म संग थिएन । यस्ता प्रश्नको जवाफ दिन सिपालु म नेता पनि त थिइन । आफनै उबडखावड जिन्दगीका मोड हिडदा हिडदै थकाई लागेर बिसाइरहेको म ...
जीवन मलमलको बिछ्यौना कि दलदलको ?
बिनिता रेग्मी मैले बुझिन कि खै जीवनले मलाई बुझ्न सकेन छुटाउन नसकेर म दोसाँधमा उभिएको छु । हुन त थाक्न नहुने बेला छ, तर पनि कहिलेकाहिँ एकदम एक्लो महसुस हुन्छ । कसलाई भनौं आफ्नो मनको कुरा रु सुनिदिने पो को नै छ र रु भन्नलाई पनि र कहिले त साँच्ची नै दिक्क लाग्छ, जीवनदेखि आफैँलाई । ‘भगवान किन तिमी यत्ति निष्ठुरी ...
यो हो नेपाल र भारतबीच विवादको जरो
यतिबेला फेरि दक्षिणतिरको छिमेकी देश भारतले नेपालविरुद्ध शत्रुतापूर्ण व्यवहार देखाउन थालेको छ । नेपालमा संविधानसभाले निर्माण गरेको भारतको भन्दा धेरै लोकतान्त्रिक र समावेशी चरित्रको संविधानमाथि नकारात्मक दृष्टिकोण बनाएर भारतीय शासकहरूले भ्रम फैलाउने दुस्साहस गरिरहेका छन् । नेपालप्रति भारतको नकारात्मक धारणा बन्नुको कारण के हो रु यो विषय ज्यादै गम्भीर बन्न पुगेको छ । नेपाल र भारतबीचको विवादको जरो पत्ता लगाएर ...
द फस्ट प्रपोज, रिक्वेष्ट नम्बर ५०१
सविता सापकोटा आजकल फेसबुकमा धेरै रिक्वेष्टको ओइरो लाग्न थालेको छ । फेसबुकको सेटिङमा ‘हु क्यान सेन्ड यू फ्रेन्ड’ रिक्वेष्टमा ‘फ्रेन्डस अफ फ्रेन्डस’ त गरेकी छु तैपनि आफ्ना सक्कली नाम बिगारेर पढ्नै नजान्ने नामबाट पनि ‘फ्रेन्ड रिक्वेष्ट’ आउने क्रम जारी छ । ‘फ्रेन्ड रिक्वेष्ट’ पठाउनेमा केटीभन्दा केटाहरुको संख्या धेरै नै छ । आजकलको फोटो इडिटरले गर्दा फेसबुकमा रहेका तस्बिर आर्कषक नै ...